မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အသစ်တီထွင်ထားသော လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ် - Xinhua News Agency
ပြုံယမ်း ၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK) သည် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က အသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်တစ်မျိုးကို စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနက ယနေ့အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ယင်းဒုံးကျည်ကို မြောက်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီက တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း နှင့် ယင်းစမ်းသပ်မှုသည် လောင်ချာ ၊ ရေဒါ နှင့် ဒုံးကျည် ဘက်စုံပစ်လွှတ်မှု အပါအဝင် ဘက်စုံစစ်မြေပြင်ကွပ်ကဲမှုယာဉ် လေ့ကျင့်မှုကို အတည်ပြုရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ခြုံငုံစမ်းသပ်လေ့ကျင့်မှုသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော အရေးပါမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့် လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်စနစ် အမျိုးမျိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်နေကြောင်း ၊ လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ခြင်း နှင့် ပစ်မှတ်အားတိကျစွာထိမှန်စေသည့် ဒုံးကျည်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အပြင် အမြွှာပဲ့နှစ်ခုထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာ နှင့် အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် လေယာဉ်ကဲ့သို့သော အဓိကအရေးပါသော နည်းပညာများကို မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ ပစ်မှတ်အကွာအဝေးကို ပို၍ မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားပါတီဗဟိုကော်မတီ အတွင်းဝန် နှင့် နိုင်ငံရေးပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် Pak Jong Chon က ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုကို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးသိပ္ပံသုတေသနဌာန မှ အရာရှိကြီးများနှင့်အတူ စောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် နျူကလီးယားကင်းစင်ရေးဆွေးနွေးမှု ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်သာ လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေစဉ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ခရုဇ် နှင့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်နှစ်မျိုးစလုံးအပါဝင် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုပေါင်း များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
PYONGYANG, Oct. 1 (Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) test-firedanewly developed anti-aircraft missile on Thursday, the official Korean Central News Agency reported Friday.
Pak Jong Chon, member of the Presidium of the Political Bureau and secretary of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, watched the test-launch with leading officials in the sector of national defence scientific research.
DPRK test-fired several missile tests in September, including both cruise and ballistic missiles amid deadlocked denuclearization talks with the United States. Enditem
This picture taken on September 30, 2021 and released from DPRK’s official Korean Central News Agency (KCNA) on October 1 showsatest-fire ofa“newly developed” anti-aircraft missile carried out by the Academy of Defence Science of the DPRK.